Mareykanka”Waxaan qaarijinay 27 Al-shabaab kamid ah” – Radio Muqdisho
Mareykanka”Waxaan qaarijinay 27 Al-shabaab kamid ah”
War ay soo saartay Dowladda Mareykanka ayaa lagu faah faahiyay duqeymo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab oo ciidamada Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya,iyagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya.
AFRICOM oo ah Taliska guud ee ciidamada Mareykanka oo ku sugan Qaaradda Afrika ayaa shaaciyay in weerarka oo dhacay labadii June lagu dilay 27 kamid ah kooxaha argagixisada Alshabaab,kaasi oo ka dhacay deegaanno ka tirsna Gobolka Bari ee Puntland.
Duqeymahaasi ayaa ka dhacay deegaan qayaas ahaantii 25 km u jira magaalo xeebeedka Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari,gaar ahaan dhinaca Koonfureed.
Mareykanka ayaa Qoraalka sidoo kale ku sheegay in weerarka aysan wax khasaare ah kasoo gaarin dad shacab ah,oo k ag dhawaa meelaha duqeymahaasi lala bartilmaameedsaday.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xili maleeshiyada Alshababa ay dhawaan weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada ilaalada Xeebaha ee Puntland.
AFRICOM waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan inay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah, si loo baabi’iyo argagixsada.
Warka qoraalka ah ee ka soo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale lagu yiri Tani waxaa qeyb ka tahay,in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom lagula midoobo howlgallada ka hortagga argagixisada, lana beegsado goobaha ay ku tababartaan ee Soomaliya iyo gobolkaba.
Dhawaan ayaa Mareykanka weerar kan lamid ah uu ka fuliyay duleedka Muqdisho wuxuu ku sheegay in ay ku dileen ilaa 11 kamid ah kooxaha argagixisada Alshabaab.
QM oo cambaaraysay weerar lagu qaaday Nabad ilaaliyayaasheeda
Xaflad xusuus iyo duco ah oo Muqdisho loogu sameeyay Marxuum Yuusuf Afgooye